Warbixinnada Sannadlaha ah - Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta - jacayl, jinsi iyo internetka
Bogga ugu weyn Warbixinta Sannadlaha ah
Hay'adda Abaalmarinta Reward waxaa loo asaasay Ururka Scottish Charitable Incorporated ee 23 June 2014. Waxaanu nahay SC044948 hay'ad samafal ah oo xafiis ka leh Xafiiska Hay'adda Samafalka ee Scottish Charity, OSCR. Muddada warbixinta maaliyadeed waxay soconaysaa laga bilaabo Julaay ilaa Juun sannad kasta. On this page waxaan daabacan abstract of Warbixinta Annual sanad walba. Qodobbadii ugu dambeysay ee xisaabaadka waxaa laga heli karaa Website-ka OSCR ee foomka dib loo dhigay.
Warbixin sanadeedka 2019-20
Shaqadeenu waxay diiradda saartay dhowr meelood:
Hagaajinta awooda dhaqaale ee sadaqada iyadoo la codsanayo deeqo lana abuuro goobo cusub oo ganacsi ganacsi.
Horumarinta xiriirka lala yeelan karo wada-hawlgalayaasha Scotland iyo adduunka oo dhan iyada oo loo marayo isku xirka.
Kordhinta barnaamijkeena waxbarida ee iskuulada iyadoo la adeegsanayo qaabka sayniska ee wareegga abaalmarinta maskaxda iyo sida ay ula fal gasho deegaanka.
Dhisida astaan ​​qaran iyo mid caalami ah si TRF looga dhigo urur 'go-to' lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay dadka iyo ururada u baahan taageerada goobta waxyeellada sawir-gacmeedka internetka iyada oo ah hab lagu sii xoojinayo fahamka dadweynaha ee dhismaha adkeysiga adkeysiga.
Laga bilaabo kala guur si loo kordhiyo gaaritaankeena iyo saameynkeena iyadoo si tartiib tartiib ah loo dhaqaajinayo diiradda adeegyadayada. Waxaan ka guureynaa nooc ka mid ah gaarsiinta fool-ka-foolka ah oo u gudbaya qaab adeegsanaya teknoolojiyada isgaarsiinta casriga ah.
Kordhinta websaydhkeena iyo joogitaanka warbaahinta bulshada si aan uga dhex dhisno sumadeena dhagaystayaasha Scotland iyo adduunka oo dhan.
Samaynta tababaro iyo nashaadaadyo horumarineed si kor loogu qaado heerarka xirfadeed ee kooxda TRF. Tani waxay hubin doontaa inay gaarsiin karaan durdurrada shaqooyinka kala duwan.
Guulaha ugu weyn
Waxaan mar labaad labanlaabnay dakhligeena guud ee soo galaya meel sare oo cusub oo ah 124,066 XNUMX. Waxaan helnay deeqo istiraatiiji ah oo isdaba-joog ah, oo ay kujirto midkeenii ugu weynaa ilaa maanta.
TRF waxay ilaalisay joogitaankeeda dadweynaha ee waxbarashada jinsiga, ilaalinta internetka iyo goobaha wacyi galinta waxyeelada, kaqeybgalka 7 shirarka iyo dhacdooyinka Scotland (sanadkii hore 10), 2 England (sanadkii hore 5), iyo sidoo kale mid USA ah.
Intii lagu guda jiray sanadka waxaan shaqsi ahaan ula shaqeynay in kabadan 775 (sanadkii hore 1,830). Waxaan gaarsiinnay qiyaastii 1,736 qof / saacadood oo xiriir iyo tababar ah, waxyarna ka hooseeya sanadkii hore ee 2,000 saacadood.
Laga soo bilaabo Maarso 2020 Hawlgallada Abaalmarinta Abaalmarinta waxaa gaabiyay ama beddelay aafada. Casuumad kaqeybgalka shirkii kalkaalinta caafimaadka ee rabshadaha qoyska ee Sweden ayaa la joojiyay. Dhowr kale oo hadal iyo barasho ku lug leh ayaa sidoo kale lumay.
Dakhliga ganacsiga waxaa cabudhiyay aafada, in kasta oo tan lagu magdhabay taageerada laga helay Sanduuqa Seddexaad ee Adkaysiga Qaybta Dawladda Scottish-ka.
Saddexdii maalmood ee Juun 2020 waxaan qabannay shirkii ugu horreeyay ee Caalamiga ee Xaqiijinta Da'da oo ay ka soo qaybgaleen 160 wufuud oo ka kala socda 29 dal. Tani markii hore waxaa loo qorsheeyay dhacdo fool-ka-fool ah waana in dib loo qaabeeyaa xaddidaadaha Covid darteed.
Boggeena www.rewardfoundation.org, tirada soo booqdayaasha gaarka ah waxay kor u kaceen 175,774 (sanadkii hore 57,274) iyo tirada bogagga la eegay waxay gaareen 323,765 (illaa 168,600).
Wixii Twitter ah muddadii u dhaxeysay Julaay 2019 ilaa Juun 2020 waxaan ku guuleysanay 161,000 aragtiyo tweet ah, xoogaa hoos uga dhacday 195,000 sanadkii ka horreeyay.
Kanaalkayaga YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC1-mihcAj9mf-nJKLWiT5KA) wadarta guud ee muuqaalka fiidiyowga ayaa ka kacay 3,199 ee 2018-19 ilaa 9,929. Kordhinta ugu weyn waxay ka timid clip-ka aan ka shatiyeynay New Zealand oo Dr Don Hilton uu sharaxayo saameynta porno ee maskaxda.
Sannadkii waxaan daabacnay qoraallo blog 14 ah oo ka hadlaya howlaha TRF iyo sheekooyinkii ugu dambeeyay ee ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee bulshada. Waxaan haysannay labo maqaal oo lagu daabacay joornaalada dib loo eegay, illaa mid sanadkii hore.
Sannadkan gudihiisa TRF waxay sii waday inay ka dhex muuqato warbaahinta, iyadoo ka soo muuqatay 5 sheekooyin wargeys oo ka soo baxa Ingiriiska iyo caalamkaba (sanadkii hore ee 12). Waxaan kasoo muuqanay hal wareysi raadiyaha (hoos ah 6) waxaana ka helnay tabinta arrimaha hada taagan barnaamijka The Nine ee BBC Scotland TV.
Mary Sharpe waxay soo gabagabeysay kaalinteedii gudoomiye nimo ee Xiriirka Dadweynaha iyo Gudiga u doodida Bulshada ee ku saabsan horumarka caafimaadka galmada (SASH) ee USA Muddadii afarta sano ahayd ee ay xubin ka ahayd Guddiga SASH sidoo kale waa la soo gabagabeeyay.
Laga soo bilaabo Janaayo 2020 ilaa May 2020 Mary Sharpe waxay ahayd Aqoonyahan Booqasho ah Kuliyada Lucy Cavendish, Jaamacadda Cambridge.
Hay'adda Reward Foundation waxay gacan ka gaysatay jawaab-celinta geeddi-socodka abuuritaanka Daraasad Qaran oo ku saabsan Dabeecadaha Galmada iyo Hab-nololeedka NATSAL-4.
Sannadkii saddexaad ee socda waxaan haynay Kulliyaddeenna Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud ee Aqoonsiga si aan u gaarsiino koorsooyin hal maalin ah xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyada oo qayb ka ah barnaamijyadooda Sii-wadida Horumarinta Xirfadeed. Aqoon isweydaarsiga CPD waxaa lagu gaarsiiyay 9 magaalo oo UK ah (laga soo bilaabo 5) iyo hal jeer Jamhuuriyadda Ireland. Laba aqoon isweydaarsi kale oo CPD ah ayaa loo soo bandhigay xirfadlayaal ku sugan Mareykanka.
TRF waxay sii waday inay u gudbiso sawirro qaawan internetka oo waxyeello u geysanaya tababarka wacyigelinta ee dugsiyada, xirfadleyda iyo dadweynaha guud. Barnaamijka abuurista qorshooyinka casharka ee ku saabsan sawir-gacmeedka iyo galmada ee loogu adeegsado dugsiyada ayaa loo gudbay heerarkiisii ​​ugu dambeeyay, iyadoo tijaabooyin laga qaaday dhowr iskuul. Qorshayaashii casharka ugu horreeyay ayaa lagu iibiyay dukaanka TES.com dhammaadka sanadka.
Goobaha iyo adeegyada la bixiyo
Waxaan ku deeqnay wadar ahaan 597 saacadood oo tababar lacag la’aan ah wadar ahaan 319 qof. Tani waxay si weyn uga weyneyd tiradii sanadkii hore oo ahayd 230 saacadood, in kastoo tirada dadka qaata ay ka dhacday 453 qof. Isbeddelku wuxuu ka tarjumayaa laba kala guur oo isku xidhan oo ka dhex socda sadaqada. Marka hore, waxaan awoodnay inaan lacag ka qaadno wax badan oo ka mid ah tababbarka la siiyay xirfadleyda iyo iskuulada, sidaa darteed waxaan hagaajineynaa socodka-lacagta. Waan awoodnay inaan tan samayno, ugu yaraan qayb ahaan, maxaa yeelay agabyada soo socday horumarka sanadkii hore ayaa hadda la tijaabiyey lana tijaabiyey, taasoo ka dhigaysa inay yihiin badeecooyin ganacsi ahaan u habboon.
Marka labaad, waxaan kordhinay xaddiga macluumaadka bilaashka ah ee lagu faafiyay iyada oo loo marayo kobacayaga wax ku oolka ah ee dhagaystayaasha ay gaareen agagaaraha Scotland iyo adduunka adoo adeegsanaya boggeena internetka iyo warbaahinta bulshada. Shirka Xaqiijinta Da'da ayaa si gaar ah ugu guuleystey noo oggolaanshaha inaan la xiriirno dhagaystayaal cusub.
Waxaan haynaa waraaqo dib loo eegay oo lagu daabacay 'Joornaalka Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Deegaanka iyo Caafimaadka Dadweynaha' iyo 'Xadgudubka Galmada iyo qasabnimada '. Warqadahaani waxay leeyihiin awood ay ku caawiyaan hagida cilmi baarista qaawan ee adduunka oo dhan tobanka sano ee soo socota. Tilmaamaha Waalidiinta Bilaashka ah ee Filimada Internetka ee sawir qaadista ah ee la bilaabay 2018-19 wuxuu ka kordhay 4 ilaa 8 bog, helitaanka macluumaad muhiim ah oo dheeri ah gacmaha waalidiinta ee la macaamilaya xaaladaha walaaca leh ee caruurtooda.
Warbixin sanadeedka 2018-19
Shaqadeenu waxay diiradda saartay dhowr meelood
Hagaajinta hantida maaliyadeed ee samafalka adoo dalbanaya deeqaha iyo sii wadida ganacsiga ganacsiga
Horumarinta xiriirka lala leeyahay iskaashiga mustaqbalka ee Scotland iyo adduunka oo dhan iyada oo loo marayo isku-xirka
Kordhinta barnaamijkayaga waxbarida ee dugsiyada oo isticmaalaya qaabka sayniska ee wareegga abaal-marinta ee maskaxda iyo sida ay uula dhaqanto jawiga
In la dhiso aqoonsi heer qaran iyo caalami ah si loogu dhejiyo hay'ad "go-to" oo loogu talagalay dadka iyo ururrada u baahan caawimaad dhinaca nadaafada filimada internetka si ay u sii wataan faham dadweyne ee dhismaha adkeynta adkeysiga
Kordhinta joogitaanka shabakadeena internetka iyo warbaahinta bulshada si aan u dhisno astaanta nooca dhagaystayaasha ee Scotland iyo adduunka oo dhan
Samaynta tababaro iyo nashaadaadyo horumarineed si kor loogu qaado heerarka xirfadeed ee kooxda TRF si loo hubiyo inay gaarsiin karaan wabiyadan shaqo ee kaladuwan.
Waxaan labanlaabnay dakhligeena guud oo ka badnaa £ 62,000, waxaan helnay deeqdeenii abid ugu badneyd waxaanan sii wadnay inaan kor u qaadno dakhligeena ganacsi.
Waxaan dhameystirnay deeqda 'Maalgelinta fikradaha' ee laga helo Sanduuqa Bakhtiyaa-nasiibka weyn. Tan waxaa loo isticmaalay in lagu horumariyo laguna tijaabiyo qalabka manhajka si ay u isticmaalaan macalimiinta dugsiga hoose iyo kuwa sare ee iskuulada gobolka. Waxaan rajeyneynaa in kuwani ay sii socon doonaan iibka guud laga bilaabo dhamaadka 2019.
TRF waxay ku adkeysatay joogitaankeeda waxbarashada jinsiga, ilaalinta khadka tooska ah iyo goobaha wacyi gelinta waxyeelada galmada, kaqeybgalka shirarka 10 iyo dhacdooyinka Scotland (sanadkii hore 12). England waxay ahayd 5 (sanadkii hore 3), iyo sidoo kale midkiiba USA, Hungary iyo Japan.
Intii lagu guda jiray sanadka waxaan shaqsi ahaan ula shaqeynay in kabadan 1,830 (sanadkii hore 3,500). Waxaan gaarsiinay qiyaastii 2,000 qof / saacadood oo xiriir iyo tababar ah, hoosna uga ahaa 2,920.
Barta Twitterka muddadii u dhaxeysay Julaay 2018 illaa Juunyo 2019 waxaan ku guuleysannay 195,000 aragtiyo tweet ah. Tani waxay ka ahayd 174,600 sanadkii hore.
Bishii Juun 2018 waxaan ku darnay GTranslate barta internetka, taasoo siineysa marin buuxda oo ku saabsan waxyaabahayaga oo ku qoran 100 luqadood iyadoo loo marayo tarjumaadda mashiinka. Soo-booqdayaasha luqadda aan Ingiriisiga ahayn waxay hadda ka kooban yihiin 20% taraafikadayada websaydhka. Waxaan la gaari doonnaa dhageystayaal ballaaran oo ku kala sugan Soomaaliya, Hindiya, Itoobiya, Turkiga iyo Sri Lanka.
Sannadkii waxaan daabacnay qoraallo 34 ah oo ka hadlaya hawlaha TRF iyo sheekooyinka ugu dambeeyay ee ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee bulshada. Tani waxay ahayd hal ka badan sanadkii hore. Waxaan haysannay hal maqaal oo lagu daabacay joornaal dib loo eegay.
Sannadkan gudihiisa TRF waxay sii waday inay ka dhex muuqato warbaahinta, iyadoo ka soo muuqatay 12 sheekooyin wargeys oo ka soo baxa Ingiriiska iyo caalamkaba (sanadkii hore 21) iyo sidoo kale BBC Alba oo ku taal Scotland. Waxaan ka soo muuqanay 6 wareysiyo raadiyaha ah (laga bilaabo 4) waxaanan ku kasbanay sumcadda waxsoosaarka dukumiinti TV ah oo ku saabsan xiriirka dhalinyarada.
Mary Sharpe waxay sii wadatay kaalinteedii gudoomiye nimo ee Gudiga Xiriirka Dadweynaha iyo u doodida Bulshada ee Horumarinta Caafimaadka Galmada (SASH) ee USA. In 2018 Mary ayaa loo magacaabay mid ka mid ah WISE100 hoggaamiyayaasha haweenka ee shirkadaha bulshada.
Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta waxay ku biirisay jawaab jawaab ku saabsan Guddigii Xulashada Commons ee ku saabsanaa kobcinta Teknolojiyada Immersive iyo Addictive. Iskotland waxaan ku biiriney Golihii Lataliyaha Qaranka ee Wasiiradda Koowaad ee Haweenka iyo Gabdhaha xiriirka ka dhexeeya dhibaateynta galmada iyo isticmaalka filimada.
Waxaan sii haysanay Aqoonsiga Royal ee Dhakhaatiirta Guud ee Aqoonsiga si aan u siino koorsooyin hal maalin ah xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyada oo qayb ka ah barnaamijyadooda Sii-wadida Horumarinta Xirfadeed. Aqoon isweydaarsiga CPD waxaa lagu gaarsiiyay 5 magaalo oo UK ah (laga soo bilaabo 4) iyo labo jeer Jamhuuriyadda Ireland. Laba aqoon isweydaarsi kale oo CPD ah ayaa loo soo bandhigay xirfadlayaal ku sugan Mareykanka.
TRF waxay sii waday in ay bixiso fara-galin internetka ah oo ku saabsan tacliinta wacyiga ee dugsiyada, xirfadlayaasha iyo dadweynaha.
Waxaan ugu deeqnay wadar ah 230 saacadood oo tababar lacag la’aan ah wadar dhan 453 qof. Tani aad ayey uga yaraayeen tiradii sanadkii hore oo ahayd 1,120 saacadood. Isbeddelku wuxuu ka tarjumayaa laba kala guur oo isku xidhan oo ka dhex socda sadaqada. Ugu horreyntii, waxaan awoodnay inaan lacag ka qaadno wax badan oo ka mid ah tababbarka la siiyay xirfadleyda, si aan u wanaajino socodkeenna lacagta. Waan awoodnay inaan tan samayno, ugu yaraan qayb ahaan, maxaa yeelay agabyada soo socday horumarka sanadkii hore ayaa hadda la tijaabiyey lana tijaabiyey, taasoo ka dhigaysa inay yihiin badeecooyin ganacsi ahaan u habboon.
Meel ka soo horjeed ahaan, waxaan kordhinay qadarka macluumaadka bilaashka ah ee lagu faafiyay kobacayaga wax ku oolka ah ee dhagaystayaasha ay gaadheen hareeraha Scotland iyo adduunka adoo adeegsanaya degelkeena iyo warbaahinta baahinta, gaar ahaan raadiyaha. Ku darsigayaga afar wada-tashi ee dadweynaha iyo daabacaaddayada joornaalka Xadgudubka Galmada iyo Khasabnimada laga dhigay lacag la'aan. Horumar muhiim ah ayaa noo ahaa daahfurka Tilmaanta Waalidiinta ee Bilaashka ah ee Filimada Internetka. Qoraalkan fudud ee ka kooban 4-bog ayaa hadda caawinaya waalidiinta adduunka oo dhan.
Warbixin sanadeedka 2017-18
Hirgelinta hawlaha tababarka iyo horumarinta si kor loogu qaado heerarka xirfadeed ee kooxda TRF si loo hubiyo in ay bixin karaan shaqooyinkan kala duwan
Waxaan sii waday inaan ka faa'iideysano deeqda 'Maalgelinta Maalgelinta Bixinta' ee Sanduuqa Bakhtiyaa Bixinta Baahiyaha si loo horumariyo loona tijaabiyo qalabka manhajka loogu isticmaalo macallimiinta dugsiyada hoose iyo sare ee dugsiyada dawlada.
TRF waxay sii waday in ay ballaariso joogitaanka waxbarashada jinsiga ah, ilaalinta shabakada internetka iyo wacyiga dhibta xijiyada, ka qeyb galaya shirarka 12 iyo munaasabadaha Scotland (sanadka hore 5), 3 ee England (sanadii hore 5) iyo 2 ee USA iyo waliba mid gudaha Croatia iyo Jarmalka.
Sannadki sannadkii waxaanu shaqeynay shakhsiyaadka 3,500 shaqsi ahaan waxaana loo dhiibay qofka 2,920 / saacadaha isgaarsiinta iyo tababarka.
On Twitter muddadii udhaxeysay July 2017 ilaa June 2018 waxaan ku helnay aragtiyihii 174,600 tweets, laga soo bilaabo 48,186 sanadkii hore.
Bishii Juun 2018 waxaan ku darsannay GTranslate website-ka, waxaanu si buuxda ugu helnaa nuxurkeenna ku jira luqadaha 100 iyada oo loo marayo tarjumaadda mashiinka.
Sannadkan waxaan soo saarnay 5 daabacaadyada Wargeyska Abaalmarinta iyo liiskayaga boostada ayaa noqdey mid u qalma GDPR. Sanadkan gudihiisa waxaan daabacnay joornaalada blog-ka ee 33 oo kaashanaya dhaqdhaqaaqa TRF iyo sheekooyinka ugu dambeeyay ee ku saabsan saameynta lidka-fannaanka internetka ee bulshada. Tani waxay ahayd 2 blogyo badan oo ka badan sanadki hore. Waxaan haysannay hal maqaal ah oo lagu daabacay joornaalkii hore.
Sannadguuradii Sannadguurada TRF waxay sii wadeen inay ka dhex muuqdaan warbaahinta, waxayna ka muuqdaan sheekooyinka wargeyska 21 ee UK iyo caalamkaba (sanadii hore 9) iyo sidoo kale marinka BBC ee waqooyiga Ireland. Waxaanu ku ciyaarnay wareysiyo raadiyaha 4.
Mary Sharpe waxay sii waday doorka ay ka qaadatay guddoomiyihii Guddiga Xiriirka Bulshada iyo Qareenada ee Bulshada ee Horumarinta Caafimaadka Galmada (SASH) ee USA.
Hay'adda Abaal-marinta Dib-u-habeeynta (Reward Foundation) waxay jawaab ka bixisay Istaraatiijiyada Amniga Internetka ee UK ee La-tashiga Cagaaran Waxaan sidoo kale soo gudbinay Kooxda Istaraatiijiyada Badbaadinta Internetka ee Waaxda Dijital, Dhaqanka, Warbaahinta iyo Isboortiga ee ku saabsan wax ka bedelka la soo jeediyay ee Sharciga Dhaqaalaha Digital.
Waxaan ku guuleysanay jaamacadda Royal College of Practitioners Aqoonsiga si ay u bixiyaan koorsooyin hal maalin ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyada oo qayb ka ah barnaamijyadooda Horumarinta Xirfadlaha sii wadaya. Siminaarada CPD waxaa lagu soo bandhigay magaalooyinka 4 UK.
TRF waxay sii waday in ay bixiso fara-galin internetka ah oo ku saabsan tacliinta wacyiga ee dugsiyada, xirfadlayaasha iyo dadweynaha. Waxaan wadaagnaa barnaamijka aqoon-is-weydaarsiga dugsiga ee loogu talagalay bandhigga Wonder Fools Saameynta Coolidge at The Theatre Theatre.
Guddoomiyeheena iyo Guddoomiye ayaa ka soo qayb galay barnaamijka Tababarka Wanaagsan ee Catalyst ee Edinburgh ee maalmaha 3.
Waxaanu ku deeqay wadar ahaan shaqsiyaadka 1,120 / saacadaha tababarka bilaashka ah, keliya oo ka hooseeya 1,165 sannadkii hore. TRF waxay siisay adeegyo tababar iyo bilaash ah kooxaha kooxaha soo socda:
Waxaan soo bandhignay waalidiinta 310 iyo xirfadlayaasha kooxo bulsheed, hoos ka soo wareegtay sannadkii hore 840
Agaasimaha Guud wuxuu horay u soo qabtay dadka 160 ee daawadayaasha tv-ga ee BBC Northern Ireland. Qeybta daqiiqada ee 10 waxaa lagu baahiyay barnaamijka Nolan Show, barnaamijka ugu sarreeya ee waqooyiga Ireland
Waxaan u soo bandhignay dadka 908 ee kooxo xirfad iyo kooxo ah shirarka iyo dhacdooyinka Scotland, Ingriiska, USA, Jarmalka iyo Croatia, tan iyo sannadkii hore 119
Waxaanu siinay hal meeleyn mutadawiciin ah arday jaamacadeed waxaanan ka qaybqaatay koorso naqshadaysan oo ku lug leh shahaadada 15 oo ka badan semester.
Warbixin sanadeedka 2016-17
Bishii Febraayo 2017 waxaan ku helnay deeq 10,000 'Investing In Ideas' deeq lacageed oo ka timid Sanduuqa Lootaha Baasaboorka si loo horumariyo waxyaabaha manhajka loogu talagalay macallimiinta dugsiyada hoose iyo kuwa sare ee dugsiyada dawlada.
Laga soo bilaabo 1 June 2016 illaa 31 May 2017 mushaharka madaxa shirkada waxaa lagu maalgeliyey deeq ka timid UnLtd Millennium Awards 'Dhismo "deeq" 15,000 "kaas oo la siiyaa shakhsi ahaan.
Mary Sharpe waxay dhammeystirtay ballanqaadkeedii ahaa Booqo Aqoonyahanka Jaamacadda Cambridge bishii December 2016. Xiriirka lala yeeshay Cambridge wuxuu taageeray horumarinta tarjumadda cilmi baarista TRF.
Guddoomiyaha iyo Guddoomiyuhu wuxuu dhammaystiray Barnaamijka Abaabulka Abaabulka Dib-u-cusbooneysiinta Bulshada (SIIA) ee tababarka horumarinta ganacsiga ee Melting Pot.
TRF waxay sii waday in ay ballaariso joogitaankeeda waxbarashada jinsiga, ilaalinta internetka iyo goobaha wacyiga dhibta, xaadirinta shirarka 5 iyo dhacdooyinka Scotland, 5 ee England iyo kuwa kale ee USA, Israel iyo Australia. Intaa waxaa dheer, sadex waraaqood oo keli ah oo ay daabaceen xubnaha TRF ayaa lagu daabacay joornaalada akadeemiyadda.
On Twitter muddadii u dhaxaysay July 2016 ilaa June 2017 waxaan kor u qaadnay tirada taageerayaasha ah ee 46 ilaa 124 waxaanuna u dirnay 277 tweets. Waxay heleen dareenka tweet 48,186.
Waxaan u guurey website-ka www.rewardfoundation.org in adeeg cusub oo marti-gal ah oo aad u kordhay xawaaraha sare ee isticmaalaha iyo dadweynaha. Bishii Juun 2017 waxaan bilownay Abaalmarinta Wargeyska, wargeys aanu doonayno inaanu daabacno ugu yaraan 4 sanadkiiba. Sanadkan gudihiisa waxaan daabacnay joornaalada blog-ka ee 31 oo kaashaneysa dhaqdhaqaaqa TRF iyo sheekooyinka ugu dambeeyay ee ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka.
Guulo dheeraad ah
Sanadkan gudihiisa TRF waxay bilowday inay ka dhex muuqato warbaahinta, waxayna ka muuqatay sheekooyinka wargayska 9 ee UK iyo sidoo kale telefishanka BBC ee waqooyiga Ireland. Waxaanu ku ciyaarnay labo wareysi oo ballaaran oo raadiyaha ah iyo fiidiyowyada internetka lagu daabacay OnlinePROTECT.
Mary Sharpe waxay wadaagaan cutubka xaqa ah Moodhalka Dheecaanka Internetka iyo Dembiyada Galmada iyadoo Steve Davies uu buugga ku qoray 'La shaqeynta Shakhsiyaadka Dumarka Galmoodka Galay: Tilmaamaha Dhaqtarka'. Waxaa la daabacay Routledge ee March 2017.
Mary Sharpe ayaa guddoomiye u ah Guddiga Xiriirka Dadweynaha iyo Guddiga Wakaalada ee Bulshada ee Horumarka Caafimaadka Galmada (SASH) ee USA.
Hay'adda Reward Foundation waxay gacan ka geysatay istiraatiijiyada wadatashiga ee Istaraatiijiyadda Scotland si looga hortago iyo looga takhaluso rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha, mustaqbalka Manhajka Waxbarashada Shakhsi ahaaneed iyo Galmada ee Iskuullada Iskotishka iyo Baaritaanka Kanadiyaanka ee baaritaanka saamaynta caafimaad ee filimada sawirrada ee dhalinyarada.
Abaalmarinta Abaalmarinta Reward Foundation waxaa loo qoondeeyay inay tahay kheyraad xiriir la leh boggeena guriga ee Qorshaha Waxqabadka Qaranka ee Amniga Internetka ee Carruurta iyo Dhallinyarada oo ay daabacday Dowladda Iskotland. Waxaan gacan ka geysannay Xisbiga Shaqada ee Baarlamaanka Ingiriiska ee ku saabsan Qoyska, Sayidyada iyo Kooxda Wadajirka ah ee Ilaalinta Qoyska & Ilaalinta Carruurta si loo caawiyo marinka Xeerka Dhaqaalaha Dijital ah ee loo maro Baarlamaanka Ingiriiska.
Waxaan ku deeqnay wadarta saacadaha 1,165 ee tababarka bilaashka ah, laga bilaabo 1,043 sannadkii hore. Waxaanu bixinay adeegyo tababar iyo macluumaad macluumaad ah kooxahan soo socda:
650 ardayda dugsiyada ee Scotland
840 waalidiinta iyo xirfadleyda kooxaha bulshada
Dadka 160 ee dhagaystayaasha daawadayaasha TV-ga ee BBC Northern Ireland. Qeybta daqiiqada ee 10 waxaa lagu baahiyay barnaamijka Nolan Show, barnaamijka ugu sarreeya ee waqooyiga Ireland
119 kooxo xirfad iyo kooxo ah kulamo iyo dhacdooyinka Scotland, England, USA iyo Israel
Waxaan bixinnay meeleynta mutadawiciinta ee XNUM ee ardayda iyo dugsiyada jaamacadda.
Warbixin sanadeedka 2015-16
Hagaajinta hantida maaliyadeed ee samafalka adoo dalbanaya deeqaha iyo bilowga ganacsiga ganacsiga
Horumarinta xiriirka lala yeesho iskaashiga mustaqbalka ee Scotland adoo isku xiraya
In la abuuro barnaamij tacliineed oo loogu talagalay dugsiyada isticmaalaya qaabka sayniska ee wareegga abaal-marinta ee maskaxda iyo sida ay uula dhaqanto jawiga
In la dhiso aqoonsi heer qaran iyo caalami ah si ay TRF ugu noqoto hay'ad "go-to" ah oo loogu talagalay dadka iyo ururrada udubdhexaadka ah ee gacan ka geysanaya aagga sawir-gacmeedka ah ee qaawan ee internetka si looga hortago fahamka dadweynaha ee lagu dhisayo adkaysiga adkeysiga
Ballaarinta joogitaanka shabakadayada iyo warbaahinta bulshada si ay u dhisaan astaanta nooca dhagaystayaasha ee Scotland iyo adduunka oo dhan
Codsi guuleysi ah ayaa loo sameeyay UnLtd oo ah "Dhise" Abaalmarinta £ 15,000 oo deeq ah si loogu bixiyo Mary Sharpe mushahar hal sano ah laga bilaabo Juun 2016. Natiijo ahaan bishii Maajo 2016 Mary waxay iska casishay xilka wakiilka samafalka waxayna u wareegtay doorka Chief Sarkaalka Fulinta. Dr Darryl Mead ayay guddigu u doorteen inuu noqdo Gudoomiyaha cusub.
Mary Sharpe waxay keentay shaqo si ay u horumariso shabakad wadaagayaal karti leh. Shirarka waxaa la qabtay wakiilo ka socda xabsiyo haboon, mustaqbalka wanaagsan, Scottish Catholic Education Association, Livhians Galmada Caafimaadka, NHS-ta Lotian Healthy Concert, Golaha Magaalada Edinburgh, Waxqabadka Caafimaadka Scotland ee Dhibaatooyinka Khamriga iyo Sanadka Aabaha.
Mary Sharpe waxaa loo magacaabay Jaamacadda booqashada Jaamacada Cambridge bishii December 2015. Darryl Mead waxaa loo doortay inuu yahay UCL Tababaraha Farsamada Sharafta leh. Xiriirka jaamacaddan ayaa taageeray horumarinta tarjumadda cilmi baarista ee TRF.
Mary Sharpe waxay ku dhameysatay tababarkeedii iyada oo loo marayo Barnaamijka Abaabulka Abaabulka Abuuridda Abaabulka Bulshada (SIIA) ee Melting Pot. Kadib waxay ku biirtay barnaamijka SIIA-ga ah, oo ay weheliso xubin Guddiga Dr Darryl Mead.
Ku guuleysiga dibada
TRF waxay soo saartey joogitaanka goobta ilaalinta internetka iyo beeraha waxyeelada ah, oo ka qeyb galaya shirarka UK 9.
Warqadaha ay qoreen xubnaha TRF ayaa loo aqbalay inay soo bandhigaan Brighton, Glasgow, Stirling, London, Istanbul iyo Munich.
Bishii Febraayo 2016 waxaan bilownay boggeena Twitter @brain_love_sex waxaanay balaarisay website-ka 20 ilaa bogaga 70. Waxaan sidoo kale ku soo bartay websaydhka horumarinta.
Mary Sharpe waxay wadaagaan cutubka xaqa ah Moodhalka Dheecaanka Internetka iyo Dembiyada Galmada iyadoo Steve Davies uu buugga ku qoray 'La shaqeynta Shakhsiyaadka Dumarka Galmoodka Galay: Tilmaamaha Dhaqtarka'. Waxaa la daabici doonaa Routledge Febraayo 2017.
Mary Sharpe ayaa loo doortay guddiga Ururka Bulshada ee Horumarinta Caafimaadka Galmada (SASH) ee USA.
TRF waxay soo gudbisay jawaabaha wareysiga Golaha Wakiilada ee Australiya Dhibaatada loo geysto caruurta Australiyaanka ah iyada oo loo marayo galitaanka sawir-gacmeedka internetka iyo wadatashiga Dowladda UK ee ku saabsan Ammaanka Ilmaha ee Ilmaha: Xaqiijinta Da'da ee Sawir-gacmeedka.
Waxaan bilaabay in aan u fidinno ficil-gareenta internetka ee tababarka wacyi-gelinta ee dugsiyada Scottish-ka ku salaysan ganacsi.
TRF waxay heshay deeq lacageed oo ah 2,500 oo ah maalgalinta abuurka ah ee loogu talagalay abuurista barta internetka ee dhalinyarada waaweyn. Waxaa lala kaashan doonaa dadka dhalinyarada ah ee laga soo qaaday dhageystayaasha bartilmaameedka.
Waxaan ku deeqnay wadarta saacadaha 1,043 ee tababarka bilaashka ah, laga bilaabo 643 sannadkii hore.
Waxaanu bixinay adeegyo tababar iyo macluumaad macluumaad ah kooxahan soo socda:
Macallimiin 60 oo ku saabsan tababarka adeegga guddiga Edinburgh City Council
45 saraakiisha caafimaadka galmada ee NHS Lothian
3 jimicsiyada Wonder Fools ee Glasgow
34 xubno ka tirsan Ururka Qaranka ee Daaweynta Nabdoonaanta
Ergooyinka 60 ee shirarka onlineProtect ee London
Ergooyinka 287 ee Golaha Caalamiga ah ee Xirfadaha Tiknoolajiyada ee Istanbul, Turkey
Fanaanada 33 iyo ardayda fanka ee Kuliyada Boqortooyada ee Boqortooyada Ingiriiska ee London
16 xubnaha Melting Pot, oo ay la wadaagaan Dr Loretta Breuning
Shaqaalaha 43 ee Xarunta Caafimaadka Galmada Chalmers ee Edinburgh
Ergooyinka 22 ee Shirka DGSS ee Sayniska Cilmi-baarista Bulshada ee Munich, Jarmalka
247 arday oo dhigta dugsiga George Heriot ee Edinburgh Waxaan siinay 3 meeleyn mutadawiciin ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga iyo jaamacadaha.
Warbixin sanadeedka 2014-15
Wadahadal taxane ah oo loogu talagalay dadka dhagaystayaasha ah ayaa waxaa sameeyay Mary Sharpe iyo Darryl Mead oo tilmaamaya qaabka abaal-marinta wareega maskaxda. Tani waxay sahamisay hanaanka takoorka, sharaxaad ka bixisey dareenka dheellitirka ah iyo faahfaahinta sida loola macaamiloono internetka uu noqon karo macaamil dhaqameed. Maqaladaha la gaaro waxaa lagu soo bandhigay hoos. Mary Sharpe waxay la hadashay shaqaale rayid ah oo 150 ah oo ka shaqeynaya Dawladda Scottish-ka.
Guddiga ayaa isku raacay dastuurka.
Guddidu waxay ku heshiiyeen shaqaalaha xafiisyada.
Kaddib Guddiga ayaa isku raacay qorshaha ganacsiga.
Koontada Baanka Khasnajiga waxaa lagu aasaasay iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin Baanka Caanka ah ee Scottish-ka.
Aqoonsi aasaasi ah oo shirkad iyo calaamo ah ayaa la aqbalay.
Heshiiska waxaa loo asaasay rukunyada buugga Maskaxdaada on Porn: Farshaxanka Internetka iyo Sii-saarka Soogalootiga in lagu abaalmariyo qoraaga Reward Foundation. Lacagta ugu horreysa ee lagu bixiyo lacagta ayaa la helay.
Mary Sharpe oo ah Kursi waxay ku guuleysatay boos barnaamijka tababarka ee Innovation Incubator Award (SIIA) ee Melting Pot. Abaalmarinta waxaa ku jiray hal sano oo ah adeegsi aan kiro-lahayn oo bannaan oo ku yaal Meesha Weelka lagu qaso.
Mary Sharpe ayaa ku guuleysatey £ 300 Mashruuca Reward Foundation ee tartanka tartanka SIIA.
Mary Sharpe ayaa codsatay kuna guuleysatay abaalmarin £ 3,150 oo ah maalgelinta Heerka 1 ee shirkadda FirstPort / UnLtd si ay noo oggolaato inaan dhisno degel wax ku ool ah. Dakhliga ka soo baxa abaalmarintan lama helin illaa sannad-maaliyadeedka soo socda.
Shirkadda suuq-geynta ayaa ku hawlanayd sidii loo horumarin lahaa website-ka iyo qaabab badan oo casri ah.
Waxaanu ku deeqnay wadarta saacadaha 643 ee tababarka lacag la'aanta ah.
Waxaan u tababarnay xirfadlayaasha soo socda: 20 sarkaal oo caafimaadka galmada ah oo loogu talagalay NHS Lothian, maalin buuxda; 20 xirfadlayaal daryeel caafimaad oo ku jira Barnaamijka Ka-fogaanshaha Lothian & Edinburgh (LEAP) muddo 2 saacadood ah; 47 aqoonyahano ku xeel dheer cadaalada dambiyada kana tirsan Ururka Iskotishka ee Daraasada dambiga lagu galayo 1.5 saacadood; 30 maamule oo ka socda Polmont Young Offenders Institution mudo 2 saacadood ah; 35 la-taliyeyaal iyo khabiirro ku takhasusay ilaalinta carruurta oo ka tirsan laanta Scottish-ka ee Ururka Qaranka ee Daaweynta Ku xadgudubka (NOTA) muddo 1.5 saacadood ah; 200 ardayda fasalka lixaad ee Dugsiga George Heriot ee 1.4 saacadood.